Bakhala ngamaphoyisa omgwaqo | News24
Bakhala ngamaphoyisa omgwaqo
ABASHAYELI bamatekisi baseMgungundlovu abahambela kuleli dolobha bathi bafuna amaphoyisa omgwaqo akwaMasipala uMsunduzi aqondise izigwegwe kubashayeli bezimoto ezincane ezipaka endaweni eyakhelwe ukuma amatekisi.
Laba bashayeli bathi amaphoyisa omgwaqo akukho akwenzayo ukuqinisekisa ukuthi izimoto ezincane azisebenzisi indawo yawo yokuma njengendawo yokupaka emgwaqeni uLangalibalele.
Ezinyangeni ezimbili ezedlule labashayeli babe nesiteleka esamisa idolobha lonke bekhala ngamathikithi abawatholayo uma beme endaweni ekungamiwa kuyona.
Bahambisa izikhalo zabo kwiMeya yalo masipala uMnuz Themba Njilo nalapho babefuna ukwakhelwa izitobhi emgqwaqeni uLangalibalele nokwagcina ngokuthi bazithole.
Laba bashayeli bathi yize sebe nendawo yokuma, kubanzima ukuma kule zindawo njengoba izimoto ezincane zivele zipake khona.
Bathi okubaphatha kabi kakhulu ukuthi uma lokhu kwenzeka, amaphoyisa anikeza bona amathikithi okuthi bame emgwaqeni kodwa ayeka izimoto ezincane ezime endaweni eyakhelwe amatekisi.
UMnuz Bongani Mngadi oshayela itekisi elihambela e-Grange okhulume nephephandaba i-Echo uthe isikhathi esiningi kuyamuphoqa ukuthi agcine eseme emgwaqeni ngenxa yokuthi isuke ingekho indawo azoma kuyona.
“Uma kukhona amaphoyisa egadile bengifike ngime emgwaqeni ngidilize abantu bese iphoyisa lize kumina lithi angisuke okanye linginikeze ithikithi esikhundleni sokuthi lisuse izimoto lezi ezime endaweni yethu. Ekugcineni thina sigcina sesithola amathikithi ezimali ezinkulu esingazi nokuthi sizozikhokha kanjani.
“Lento ayigcini ngokuhlukumeza thina kuphela kodwa ihlukumeza namabanye abashayeli bezimoto ezincane abasebenzisa lo mgwaqo.
“Sigcina sesixabana nabashayeli bezimoto ezincane bethi sibanga isiphithiphithi ekubeni kuyibona futhi ababuye bame endaweni eyakhelwe ukuthi sime kuyona ukuze kungabi naso isiphithiphithi,” kusho yena.
Omunye umshayeli wetekisi ohambela eMbali kodwa ongathandanga ukudalulwe igama lakhe uthe lolu daba luya bahlukumeza kakhulu.
“Ukukhuluma iqiniso iyasidina lento eyenzekayo ngoba ekugcineni ithina esibukeka njengabantu ababi abangafuni ukulandela imithetho yomgwaqo. Ukucela kwethu izitobhi kuLangalibalele ingoba sasingafuni ukuphazamisa izimoto ezisebenzisa lomgwaqo ngokuthi sivele sime emgwaqeni. Lento ifuna ukulungiswa ngokukhulu ukushesha. Umuntu opaka imoto yakhe endaweni yokuma amatekisi kumele athole ithikithi elizomfundisa isifundo sokuthi angaphinde,” kusho yena. Okhulumela umasipala uMsunduzi uNks Thobeka Mafumbatha akaphendulanga imibuzo athunyelwe yona ngesikhathi sokushicilela.